Apple waxay mar hore oggolaatay in la kordhiyo AppleCare + gudaha Spain, France iyo Italy | Wararka IPhone
Toni Cortés | 18/09/2021 21:00 | dhowr
Suurtagalnimada kordhinta dammaanadda ayaa ugu dambayntii timid AppleCare + in ka badan saddex sano ilaa hadda. Ikhtiyaarkan ayaa mar hore sanadkan laga hirgaliyay waddamada qaar, haddana wuxuu gaaray Spain, France iyo Italy.
Hadda waxaad fursad u leedahay inaad kordhiso AppleCare + aaladdaada wixii ka dambeeya taariikhda dhammaadka, iyo bixiso qayb bille ah, sida haddii ay tahay rukunsi. Taariikhda dhammaad ma leh, maadaama bil walba la cusbooneysiinayo, ilaa aad baajiso. Ikhtiyaar wanaagsan, shaki la'aan.
Apple ayaa hadda soo saartay a warqad taageerada halka ay ku qoran tahay Spain, Faransiiska iyo Talyaaniga Waxay ku biiraan Mareykanka, Australia, Canada, Jarmalka, Japan iyo UK iyagoo ah dalal halkaas oo adeegga AppleCare + lagu kordhin karo wax ka badan saddex sano.
Sidan, shirkaddu waxay ku siinaysaa suurtagalnimada inaad kordhiso dammaanadda AppleCare + ee aad qandaraaska ku qaadatay iPhone -kaaga, iPad -ka ama Apple Watch, adiga oo aan dhicin taariikhda dhicitaanka. Waxaad bixin doontaa bil kasta sidii haddii a rukumo.
Ikhtiyaarkan si loo kordhiyo dammaanadda, Apple waxay bilo kahor biloowday Australia, Canada, Germany, Japan, UK iyo Mareykanka. Hadda ugu dambayn saddex dal oo kale oo Yurub ah ayaa ku biiraya, oo ay ka mid yihiin Espana.
Haddii aad hore ugu lahayd qandaraaska AppleCare + mid ka mid ah aaladahaaga, waxaad ka faa'iideysan kartaa qorshahan cusub 30 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda dhammaadka adeegga AppleCare +. Apple waxay xustay in kordhinta si otomaatig ah loo cusboonaysiinayo illaa la kansal gareeyo, sidii inay tahay xubin -ka -noqoshada, waxayna shirkaddu tilmaamaysaa inay soo afjari karto caymisyada xaaladaha qaarkood, oo ay ku jiraan kiisaska qaybaha adeegga ee aan hadda la heli karin.. Xaaladdaas Apple ayaa kula soo socodsiin doonta.
Waad hubin kartaa marka daboolida qalabkaagu dhammaado bogga taageerada Apple: mysupport.apple.com. Adeegga AppleCare + wuxuu bixiyaa caymis ka baxsan heerka caadiga ah ee Apple ee damaanadda xaddidan ee hal sano ah iyo illaa 90 maalmood oo taageero farsamo ah. Adeeggu wuxuu ballaariyaa caymiska dayactirka qalabka wuxuuna ku daraa ilaa laba dhacdo oo shil dhaawac ah 12kii biloodba mar, mid walbana wuxuu ku xiran yahay khidmadda adeegga iyadoo ku xiran nooca aaladda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxay horey u oggolaatay inay kordhiso AppleCare + gudaha Spain, Faransiiska iyo Talyaaniga
Sida loo helo ogeysiis marka iPhone -kaaga si buuxda loo dallaco